Ungazisusa njani iiNtengiso ezivela kuwe ngeTyhubhu? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungazisusa njani iintengiso kuYe Tube?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 318
Iividiyo zeTyhubhu zihlala zibandakanya iintengiso, ezinokuthi ngamanye amaxesha zingonwabi kwabanye abasebenzisi, abanokuba nomdla wokususa ezinye zezi izibhengezo iintengiso ukujonga umxholo weevidiyo ngaphandle kweziphazamiso.
Xa abasebenzisi befuna ukususa iintengiso kwi-You Tube, kufuneka basebenzise ezinye zezixhobo kunye nokusetyenziswa okukhoyo kwi-intanethi ukukhubaza iintengiso ezivela ekuqaleni kweevidiyo ze Tube. Ukulandela amanyathelo amathathu alula ungasusa intengiso eqongeni.
Amanyathelo okususa iividiyo acacisiwe kwiTestTube
La manyathelo mathathu ayinxalenye yeqhinga elilula, eliye laphuhliswa ngaphakathi kwesifukamisi sezimvo zeqonga leYou Tube, elaziwa ngegama iTestTube, nelaziwa ngalo Uphando.
Kungenxa yokuba eli qhinga liyaziwa Uphando, Inkampani inokuthatha isigqibo sokuyirhoxisa kwixesha elizayo. Okwangoku, kwabo baziva bengonwabanga xa kuvela intengiso ngelixa bebukele ividiyo, banokuwonwabela umxholo weevidiyo zeevidiyo zikaYouTube, ngaphandle kokuvela ngokuqhubekayo.
Intengiso kuYe Tube
Ngaphandle kwamathandabuzo, izibhengezo zinenjongo ebaluleke kakhulu kwiqonga le-You Tube, ke ukususa iividiyo yenye yeendlela kwabo bangonwabi xa bevela kwiwebhusayithi. platform, kuba zinokubangela ukuphazamiseka okungathandekiyo xa ubukele ividiyo ngononophelo.
Njengokuba bonke abasebenzisi be-You Tube bengenakho ukukhetha okufanayo, akunakuphikwa ukuba kuya kubakho abo bafuna ukubona ezi ntengiso ukuze bafumane malunga neendaba ezinikezelwa luhlobo oluthile mveliso okanye inkonzo.
Iividiyo zeqonga le-You Tube
Iividiyo zeTyhubhu zenziwe ngokudityaniswa okufanelekileyo imifanekiso, imifanekiso, umculo, iaudiyo okanye amabinzana, ekungenakuphikwa ukuba uninzi lweevidiyo zalo zinomtsalane kuninzi lwabantu abasebenzisa i-intanethi, encede eli qonga ukuba libhalise ukukhula ngempumelelo ukusukela oko lasekwayo ngonyaka ka-2005.
I-You Tube portal yiwebhusayithi esekwe e-United States, ezinikele ekwabelaneni ngevidiyo. Eli qonga libonelela abasebenzisi balo isixa esikhulu somxholo wokumamela, phakathi kwabo: umboniso de iifilimu, iinkqubo zikamabonwakude, iziqulatho ezinje iiblogi zevidiyo kunye nawe Tube yeMidlalo.
1 Amanyathelo okususa iividiyo acacisiwe kwiTestTube
2 Intengiso kuYe Tube
3 Iividiyo zeqonga le-You Tube
Uyisebenzisa kanjani iYouTube ngendlela engacacanga?
Ungabhalisa njani kwi-You Tube?